SAMVA: Tsy nisy fiovana ireo fitaovana eo ampelatanany, miantso ireo tsara sitrapo hifanampy
mercredi, 04 décembre 2019 17:06
Manazava ao amin’ny pejy facebook ny mpitantana ny SAMVA (Service Autonome de Maintenance de la Ville d'Antananarivo) fa « tsy nisy fiovana aloha hatreto ny fitaovana teo ampelatanany » amin’ny fandraofana fako eto Antananarivo Renivohitra.
Isika izao, isan'izany ny litchi sy ny garaba miaraka aminy, izay tsy voafehintsika mihitsy ny mikajy izany, vokany mitobaka avo telo heny etsy sy eroa ny fako eto Antananarivo.
Raha 34% ny fako izay voaroakan’ny SAMVA teo aloha amin'ireo fitaovana teo ampelatanany dia nihena izany ankehitriny satria niha navesatra ny fako izay lena amin’izao fotoam-pahavaratra iakaran'ny voankazo izao, amin'ny sobika ihany koa no ampikarin'ireo mpiasa miakatra eny ambony kamiao, izay adiny iray ny mameno izany teo aloha, ankehitriny kosa adiny roa.
Milaza ny SAMVA fa misy ny tsara sitrapo izay nanome fitaovana handraofana fako maimaim-pona. Manentana ireo malalatanana tsara sitrapo afaka hifanampy aminy ihany koa ny SAMVA hanesorana ny fako, hitsenana ny fetin'ny Noely sy ny taona vaovao.